Axad, Jan 10, 2021-Diyaarado duqeyn ka geystay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya – LaacibOnline
Axad, Jan 10, 2021-Diyaarado duqeyn ka geystay gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya
January 10, 2021 Abdirisaaq	0 Comments
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Sida laga soo xigtay dadka deegaanka saacadihii ugu danbeeyay dagaal dagaal oo loo maleynayo in laga leeyahay dalka Kenya ayaa duqeyn dhinaca cirka ah ka geystay qeybo ka mid ah gobolka Gedo.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalka Madaxwayne Qoor Qoor ee ahaa in dadka tabashada ka qaba hannaanka doorashada uu kusoo celiyey jawaab tanaasul ku jiro oo ka timid madaxda dowladda federalka.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Somaliland ayaa maanta xayiraadii ka qaaday telefishinka Universal oo kamid ah telefishinada madaxa bannaan, kadib muddo dhowr bilood ah oo lagaga mamnuucay inuu ka shaqeeyo gudaha Somaliland.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Ugu yaraan afar askari oo ka tirsan millatariga Kenya ayaa la dilay tiro kalane waa la dhaawacay kadib markii gawaaridooda lala eegtay qarax meel u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Kiiskaska cudurka Covid 19 ee qaarradda Africa ayaa u muuqda mid sare u sii kacaya iyadoo ilaa iyo hadda Tirada la xaqiijiyay ee COVID-19 ee qaaradda Afrika ayaa gaarayaan 2,986,564 ilaa galabnimadii Sabtida sida laga xigta xarunta Afrika ee xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (Africa CDC) ayaa sidaas sheegtay.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Iyadoo dhawaantan Wasiirka Wasaarradda Ganacsiga Xukuumadda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar uu magacaabay guddi ku -meel-gaar ah oo sii waddi doona howlihii rugta Ganacisga iyo Warshadaha ayaa qoraal ka soo baxay guddigan KMG ee la magacaabay waxaa ay ku sheegeen in ay bilaabi doonaan howlaha loo idmaday.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Dagaal hor leh oo dhex marey Soomaalida iyo Booranta ku dhaqan xuduudda gobollada Wajeer iyo Gaarisa ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay ku dhinteen toddoba qof.
Axad, Janaayo, 10, 2021 (HOL) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud kana mid ah midowga musharixiinta dalka ayaa ayaa si adag uga jawaabay tallaabadii ay xukuumaddu ku go’aansatay in doorashada la qabanayo iyadoo aysan jirin cid loo joojinayo.
← COVID-19 screening pilot project launched at Canada’s largest airport
Axad, Jan 10, 2021-Dagaal culus oo ka dhacay degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose →
Khamiis, Nov 12, 2020-Puntland oo gacanta ku dhigtay boqolaal malyan oo lacago shilin Soomaali ah
Khamiis, Sept 17, 2020-Ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya oo dowaladda federalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqay inay muujiyaan tanaasul